ရှင်းလင်းကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ကို မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း (Part 2)
ရဲလင်းထွန်း (အင်းစိန်) How To Gain A Clear Conscience Part 2. Practical Christian Living Course IV, Lesson 8
အဓိကကျမ်းပုဒ် ။ ။ ပေါလုသည် လွှတ်အရာရှိတို့ကို စေ့စေ့ကြည့်ရှု၍၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ အကျွန်ုပ်သည် ယနေ့တိုင်အောင် ဘုရားဝတ်ကိုပြုခြင်းအမှုမှာ၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံသည် ကိုယ်၌အပြစ်တင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွတ် လျက် ပြုပါသည်ဟု ပြောဆိုသော်”” တမန် ၂၃း၁
ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ရှိရန် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို ကျမ်းစာထဲတွင် များစွာပြောပြ ထားသည်။
· ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ ပေါလုက ““ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကောင်းသော သြတ္တပ္ပ စိတ်ကို ကိုင်ဆွဲထားကြောင်း””ကို ပြောပြထား သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ု သြတ္တပ္ပစိတ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားရသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းမှာလည်း အားနည်းသွား၍ ထိရောက်မှုမရှိတော့ပါ။
· ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုတောင်းချက်များ အဖြေရရန်အတွက် ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ ကျမ်းစာက ““ချစ်သူ တို့၊ ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်လျှင်၊ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ ရဲရင့်သောအခွင်ရှိကြ၏။ ငါတို့သည် ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်၍ နှစ်သက်တော်မူသော အကျင့်တို့ကို ကျင့်သောကြောင့် ဆုတောင်းသမျှတို့ကို ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ရကြ၏။””ဟုဆိုသည်။ ၁ယော ၃း၂၁-၂၂
· ကျန်းမာရေးကောင်းရန်အတွက် ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ ကျွ့န်ုပ်တို့ ၏ သြတ္တပ္ပစိတ်က ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ် ရှိ သည်ဟု ပြောနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်လေးလံသော အရာ တစ်ခုကို ““မ”” ထားရသကဲ့သို့ဖြစ်နေပေမည်။
· ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သော ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံမှုကို တည်ဆောက်လိုပါက၊ ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မရှိမဖြစ် လိုအပ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို ကသိကအောက်ဖြစ်စေ၊ နာကျင်စေခဲ့သော အချိန်များရှိခဲ့ဖူးပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့၏ လေးစားမှုကို ဆက်လက်ရရှိလို၍ ဆက်ဆံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားလိုပါက၊ သူတို့နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်အောင် လုပ်ရမည်။
· ထိရောက်မှုရှိစွာ သက်သေခံနိုင်ရန်အတွက် သန့်ရှင်းသော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။ သင်သည် တစုံတဦးအပေါ်တွင် အပြစ် ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး သူနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်အတွက် ကြိုးစား အားထုတ်မှု လုံးဝမရှိပါက၊ သင်သည် ထိုသူအားထိရောက်စွာ သက်သေခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
· အားလုံးထဲမှ အရေးကြီးဆုံးမှာ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ခြင်း၌ ၀မ်းမြောက်နိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ် ကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်ရုံမက ဘ၀တူလူများနှင့်လည်းသင့်မြတ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သြတ္တပ္ပစိတ် ထဲ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်ရှိသည် ဆိုသော အသေးငယ်ဆုံးသော စွပ်စွဲချက်လေးတောင်မှ ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ဘုရားသခင်၏မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို အနှောင့် အယှက် ပေးမည်ဖြစ်သည်။
သြတ္တပ္ပစိတ်သည် မည်သို့ အလုပ်လုပ်သနည်း?
ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်မှာ ဘုရားသခင်က သူ့အလိုတော်နှင့် သန့်ရှင်းမှုကို ဖော်ပြရာနေရာဖြစ် သည်။ ဤနေရာ၌ ဘုရားသခင်က ကိစ္စတခု နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သူ၏စိတ်တော်ကို ဖော်ထုတ်ပြသသည်။ အမှုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်မှာ မည်သို့ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပ စိတ် ထဲတွင် သိရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကျွန်ုပ်တို့နာခံရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝိညာဉ်အတွက် “ ပြတင်းပေါက် ” ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဤ “ပြတင်းပေါက်” ကို ဖြတ်၍၊ ဘုရားသခင်၏ အလင်းတော်သည် ၀င်ရောက် ထွန်းလင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းလူကို သူ၏အလင်းတော်နှင့် သမ္မတရားအားဖြင့် ပြည့်နှက်စေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သာ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နာခံပါက၊ ““ ပြတင်းပေါက် ”” သည် ရှင်းလင်းကြည်လင်ခြင်းနှင့် ပို၍ ထိုးဖေါက်မြင်နိုင်ခြင်းရှိပြီး ဘုရားသခင်၏ အလင်းတော် သည် ပို၍ ပို၍ တောက်ပစွာ ၀င်ရောက်ထွန်းလင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို မနာခံဘဲ ဤစိတ်၏ အပြစ်တင်မှုကို လည်း မကိုင်တွယ်မဖြေရှင်းပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်သည် ပြတင်းပေါက်တခုကဲ့သို့ ညစ်ပတ်လာပြီး ကြည်လင်မှုရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ၊ အပြစ်များတိုးတက် ပွားများလာသည် နှင့်အမျှ၊ ဖုန်များနှင့် မဲညစ်မှုများသည်လည်း တိုးပွားလာမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏ အလင်းတော်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နိုင်ရှာ တော့ မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ယုံကြည်သူတဦးသည် သူ၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ဆက်လက်မနာခံမြဲ မနာခံပါက သူ့စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်ပြုရာ၌ အပြစ်ရှိသည်ဟုပင် မခံစားရသောအဖြစ်သို့ တနေ့တွင် ရောက်ရှိလာပေလိမ့်မည်။ ဤအခြေ အနေသည် ခရစ်ယာန်တိုင်းအတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် အခြေအနေ တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““ ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်၊ --- ဒုစရိုက်၏ လှည့်ဖျားခြင်းအားဖြင့် သင်တို့ စိတ်နှလုံး မခိုင်မာစေခြင်းငှာ၊ ယနေ့ ဟူ ၍ ခေါ်ဝေါ်သော အချိန်၊ နေ့တိုင်း အစဉ်အချင်းချင်း တယောက်ကို တယောက်တိုက်တွန်း တိုးဆော်ကြလော့။ ”” ဟုဆိုသည်။ ဟေဗြဲ၊ ၃း၈၊၁၃။
ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်သည် အတိတ်နှင့် အနာဂတ် နှစ်ခုစလုံးကို ကိုင်တွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အမှားတခုခုလုပ်ပါက ဤစိတ်က ကျွန်ုပ်တို့ကို အပြစ်ပြရုံသာမက သခင်မနှစ်မြို့စေသော အရာတစုံတခု ကို ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်မိဆဲဆဲတွင်လည်း မလုပ်မိစေရန် ဤစိတ်က သတိပေးသည်။ သင်၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နာခံရာ၌ သင်လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း (၂)ခုရှိသည်။
(၁) အကယ်၍ သင်သြတ္တပ္ပစိတ်က တစုံတခုကို သင်လုပ်လိုခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဟုသတိပေးပါ က ထိုအရာကို မလုပ်ပါနှင့်။
(၂) အကယ်၍ သင်သည် အမှားတခုခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါက၊ ထိုအပြစ်ကို ချက်ခြင်းဝန်ချတောင်းပန်ပြီး ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ကို တောင်းခံ ရ ယူပါ။
သင်၏သြတ္တပ္ပစိတ်ထဲတွင် ဘုရားသခင် ပြသသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ပါ။ နာခံခြင်း၏နေရာကို မည်သည့်အရာကမှ ၀င်မယူနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ သူ့ကို နာခံရမည်ဟု သခင်က အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဥာဏ်ပညာက ကန့်သတ်ထားသည်။
ဘုရားသခင်၏ အမြင်၌ မည်သည့်အရာက မှန်လဲ၊ မည်သည့်အရာက မှားလဲဆိုတာကို မည်သို့ သိ နိုင်မည်နည်း? ကျွန်ုပ်တို့ သိနိုင်မည့်
နည်းလမ်း တစ်ခုမှာ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင် သူ ပြောထားသော အရာများကို ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က အရာတစုံတခုသည် မှန်ကြောင်းပြောပါက၊ ထိုအရာသည် မှန်ကန်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြရသည်။ အကယ်၍ သူ့နှုတ်ကပတ်တော်က အရာတစုံတခု သည် မှားယွင်းသည်ဟု ပြောပါက၊ ထိုအရာသည် မှားယွင်းသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိကြရသည်။
သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရခါစ၌ ကျမ်းစာအကြောင်း ကို အများကြီးမသိကြပါ။ အပြစ် ဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောထားသောအရာများစွာသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဘ၀ထဲတွင် ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မသိနားမ လည်ပါက၊ ထိုအရာများသည် အပြစ်များဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်ကြမည်မဟုတ်ပါ။
သခင်က ဘာကိုလုပ်သနည်း? သူကကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို တခုချင်းစီ စတင်ပြသသည်။ သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ဂရုဏာတော် ကြွယ်ဝ လှသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို တကြိမ်တည်း ဖြင့်မပြသပါ။ ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စိတ်ဓာတ်ကျသွားစေနိုင်သည်ကို သူသိသည်။ ထိုသို့လုပ် မည့်အစား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို တစ်ခုပြီးမှတစ်ခု ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖော်ပြသည်။
အံ့သြ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သမ္မာတရားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘ၀ထဲရှိ ကျွန်ုပ်တို့မသိသော အပြစ်တစ်ခုသည် သခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်သဟာယကို နှောင့်ယှက်တားဆီးမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ သိသောအရာများသည် သူ၏အလိုတော်ဖြစ်ကြောင်းကို သေချာစေပြီး ထိုအရာတို့ကို နာခံရုံမက ဘုရားသခင်က အပြစ်ဟုသတ်မှတ်သော အရာများကို စွန့်လွှတ်ပါက၊ သူနှင့်ပြီးပြည့်စုံစွာ မိတ်သဟာယဖွဲ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““ဘုရားသခင်သည် အလင်း၌ ရှိတော်မူ သကဲ့သို့၊ ငါတို့သည် အလင်း၌ ကျင်လည်လျင် အချင်းချင်းမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည်၊ ငါတို့အပြစ် ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏””ဟုဆိုသည်။ ၁ယော ၁း၇
““အလင်းတော်၌ကျင်လည်သည်””၏ ဆိုလိုရင်းမျာ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသောအလင်းကို နာခံသည်ဟုဆို လိုခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော အလင်းကို နာခံပါက၊ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌ ၀မ်းမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရေးကြီးသောအရာမှာ သူ့ အလိုတော်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘောထား ပင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို နာခံဖို့ရန်အတွက် ရိုးသားစွာဆန္ဒရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏ အစအဦး၌ပင် သူနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော မိတ်သဟာယဖွဲ့မှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀ထဲတွင် အပြစ်များစွာရှိနိုင်သော်လည်း၊ ထိုအပြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့မသိပါက၊ ထိုအပြစ်တို့သည် အဖိုးထိုက်လှစွာသောခရစ်တော်၏ အသွေးတော် ဖုံးအုပ်မှုအောက်၌ ရှိနေကြသည်။
အခြားတဖက်၌၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀ထဲရှိ အပြစ်တခုခုကို ဘုရားသခင်ကပြသပါက၊ ထိုအပြစ်ကို ၀န်ချတောင်းပန်ရန်နှင့် စွန့်လွှတ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်ထဲ တွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိသည်ဟု ပြောခြင်းကို မသိသလိုနေ၍ ထိုအပြစ်ကို ဆက်လက် တည်တံ့ စေပါက သခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားယုံကြည်သူများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌ သိထားရမည့်အရာမှာ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ၌ရှိသော ဥာဏ်ပညာ ပမာဏသည် တယောက်နှင့်တယောက်မတူညီကြပါဆိုသော အချက်ဖြစ်သည်။ အခြားသောယုံကြည်သူများက အလွန်ကြီးလေးသော အပြစ်ဟု သတ်မှတ်သောအပြစ်များကို အချို့သောယုံကြည်သူများက အပြစ်ဟုပင်မထင်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာများကို မသိသူများအား မငြင်းပယ်သင့် သလို မစီရင်သင့်ပါ။ ထိုသို့လုပ်မည့်အစား၊ သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပေးသင့်၍ ကူညီပေး ရန်ကြိုးစားသင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့မသိသော အပြစ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို မငြင်းပယ် ခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ညီအစ်ကိုမသိသော အပြစ်များအတွက် သူကို မငြင်းပယ် သင့်ပါ။
သင်၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နှုတ်ပိတ်ရန် (သို့) ပယ်ဖျက်ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။
သင်၏သြတ္တပ္ပစိတ်က သင့်ကိုစကားပြောသောအခါ၊ သင်လုပ်ရမည့် စည်းမျဉ်းနှစ်ခုကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ကို ထပ်ပြောပါမည်။
(၁) အကယ်၍သင့် သြတ္တပ္ပစိတ်က တစုံတခုကို သင်လုပ်လိုခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဟု သတိပေး ပါက၊ ထိုအရာကိုမလုပ်ပါနှင့်။
(၂) အကယ်၍ သင်သည်အမှားတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါက၊ ထိုအပြစ်ကို ချက်ချင်း ၀န်ချတောင်း ပန်ပြီး ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ကိုရယူပါ။
စိတ်မကောင်းစွာပင်၊ ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် ဤရိုးရှင်းလှသော စည်းမျဉ်း(၂)ခုကိုပင် မလိုက် နိုင်ကြပါ။ လိုက်နာရမည့်အစား၊ သူတို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နှုတ်ပိတ်ရန် ကြိုးစားတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ နှုတ်ပိတ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါနည်း (၂)ခုထဲမှ တခုခုကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။
(၁) သူတို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့် ငြင်းခုန်ကြခြင်းအားဖြင့်။
တစ်စုံတစ်ဦးက တစ်စုံတစ်ခုသည် သင့်တင့်မျှတမှုရှိသည်ဟု သူထင်သောကြောင့် ထိုအရာသည် ကောင်းပါသည်ဟု မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စေ လေ့ရှိသည်။ သူက အခြားသူများ လုပ်နေသည့်အရာများကို ညွှန်ပြမည်ဖြစ်ပြီး သူထင်တာသည် မှန်ကန်ကြောင်း လူတစ်ဦးက သဘောတူပေးရန်အတွက် အခြားယုံ ကြည်သူတစ်ဦးဦးနှင့်လည်း ဤအရာကို ပြောဆိုဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
အခြားသူတစ်ဦး၏ အမြင်သဘောထားက ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ချေဖျက်စေရန် ခွင့်မပြုပါ နှင့်။ သင်သည်သတ်မှတ်ထားသောအရာ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခြင်းသည် သူအမြင်အားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံစွာ ကောင်းမွန်ပါသည်ဟု တစ်ဦးဦးက ပြောလိမ့်မည်။ သို့သော် ထိုအရာကိုလုပ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဟု သင်သြတ္တပ္ပစိတ် (သိစိတ်)ကပြောနေပါက၊ ထိုအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းသည် သင့်အတွက်မှားယွင်းသည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော် မဟုတ်ပါ ဟူ၍ သင်ယုံကြည်သောအရာများကို ဘယ်အချိန်တွင်မဆို မလုပ်ပါနှင် ကျမ်းစာက ““ယုံသောစိတ်မရှိဘဲ ကျင့်သမျှသော အကျင့်တို့သည် အပြစ်ရှိကြ၏””ဟု ဆိုသည်။ ရော ၁၄း၂၃
ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မငြင်းခုန်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရမည်။ တစ်စုံ တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်က မည်သို့ထင်မြင်လဲဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်က ပိုင်းခြား နားလည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်က တစ်စုံတစ်ခုသည် မှားသည်ဟုပြောပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထိုအရာသည်မှားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြ သောကြောင့် မိမိတို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နှုတ်ပိတ်ရန် လုံးဝမကြိုးစားပါနှင့်။
တစ်စုံတစ်ဦးသည် သူ၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို တိတ်ဆိတ်စေသည့် ဒုတိယနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်များစွာ ပြုလုပ်ခြင်း အားဖြင့် ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံသော်လည်း၊ ဘုရားသခင် က သူ့ကိုလုပ်ရန်ပြောထားသောအရာတို့လောက် ကောင်းအောင်လုပ်နေသည် (သို့) ထိုထက်ပင်ပို၍ ကောင်းအောင်လုပ်နေသည်ဟု သူထင်လိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၌ပေးလှူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူများကို ကူညီမစခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အခြားသောကောင်းမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သူ၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နှုတ်ပိတ်ရန် သူသည် ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သူသည် မိမိကိုယ်ကို အလွန်ပင်ကျေနပ်နှစ်သက်၍ သူ၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် အလွန်ပင် အဖိုးထိုက်တန်သည်ဟု ထင်ချင်ထင်လိမ့်မည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏အမြင်၌ ထိုအရာ တို့သည် တန်ဖိုးမရှိသည့် အကြောင်းမှာ သူသည်နာခံမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သြတ္တပ္ပစိတ်က ကျွန်ုပ်တို့၏ နာခံမှုကို ရိုးရှင်းစွာပင် လိုအပ်သည်။ အခြားမည်သည့်အရာကမှ ဘုရားသခင်ကို မနှစ်သက်စေပါ။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့သူ၏အမှုတော်၌ မည်မျှပေးလှူသည်။ မည်မျှ ကောင်းမှုလုပ်သည်ကို မကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နာခံခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်သည်။ နာခံခြင်း၏ နေရာကို မည်သည့်အရာကမှ ၀င်မယူနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နာခံခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်သည်။ နာခံ ခြင်း၏ နေရာကိုမည်သည့်အရာကမှ ၀င်မယူနိုင်ပါ။ ကျမ်းစာက ““...အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည် ယဇ်မျိုး ထက်သာ၍ကောင်း၏””ဟု ဆိုသည်။ ၁ရာ ၁၅း၂၂
ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်၏အပြစ် စီရင်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ရရှိရန် ကြိုးစားရှာဖွေရာ၌၊ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို တိုက်ခိုက်လာနိုင်သည် ဆိုသော အချက်ကို သတိပြုမိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို စွပ်စွဲပြီး အပြစ်ရှိ ကြောင်း စီရင်ချက်ချခြင်းအားဖြင့် စာတန်သည် ဤအမှုကို ပြုလုပ်သည်။
စာတန်က ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်အတွင်းသို့ ဤသို့သောအတွေးများကို ထည့်နိုင်ရန် ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ““မင်းထပ်ပြီး ရှုံးနိမ့်ကျဆုံးပြန်ပြီ။ ဒီလိုပဲ အမြဲမင်းနေမှာပါ။ မင်းဟာ ရှုံးနိမ့်ကျဆုံးမှုတစ်ခုကလွဲလို့ ဘာမှ ကို မဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲဒီလိုပဲ မင်း ရှုံးနိမ့်ကျဆုံးနေမှာပါ။ ဘုရားသခင်က မင်းလို လူမျိုးကို လဲ မချစ်နိုင်ပါ ဘူး။””
စာတန်တိုက်ခိုက်မှုက ဘ၀ကိုရင်မဆိုင်ရဲလောက်အောင် ကျွန်ုပ်တို့အားပျော့ခွေသွားစေနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ သူ၏လုပ်ဆောင်မှု ကို သတိပြုမိရန် အလွန်ပင်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်၏အပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အပြစ်ပြမှုတို့ကို ခွဲခြား သိရှိရမည်။ စာတန်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ အပြစ်ပြမှုတို့ကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်း အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
· စာတန်၏စွတ်စွဲချက်တို့မှာ အဆက်မပြတ် တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်နေလေ့ရှိသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားများကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဥာဏ်ကိုပွင့်စေသည်။
· စာတန်၏စွပ်စွဲချက်တို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို နာကျင်စေရန်နှင့် ဖြိုချဖျက်ဆီးရန်သာဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို တည်ဆောက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ၀န်ချတောင်းပန်နိုင်ရန်၊ စွန့်လွှတ်နိုင်ရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ တရားလမ်း၌ လျှောက်နိုင်ရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အပြစ်များကို ဖော်ထုတ်ပြသပေးခြင်းဖြစ်သည်။
· ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကို ၀န်ချပြီးတာတောင်မှ စာတန်၏ စွပ်စွဲချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံဆက် လက်၍ရောက်လာနေမည်ဖြစ်သည်။
အပြစ်ပြခြင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထံမှသာဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအပြစ်ကို ဘုရား သခင်ထံဝန်ချတောင်းပန်သောအခါ၊ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို လွှတ်ပေးပြီးနောက်၊ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ် သက်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က နောက်ထပ်အပြစ်မပြ မစီရင်တော့ပါ။
တခါတရံ စာတန်က ယုံကြည်သူတဦးအား သူကျူးလွန်ခဲ့သောအချို့သော အပြစ်များအတွက် သူ့ကို အပြစ်လွှတ်ပေးရန် မဖြစ်နိုင်ပါဟု ပြောဆိုခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူကို တိုက်ခိုက်သည်။ ဤအရာကို ယုံခြင်းသည် လိမ်ညာမှုတစ်ခုကို ယုံခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ခွင့်မလွှတ် နိုင်လောက်အောင် ကြီးသောအပြစ်မရှိပါ။ ကျမ်းစာက ““ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော် သည်၊ ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ဆေးကြော တော်မူ၏။ ...ကိုယ့်အပြစ်တို့ကို ဖော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း၊ ပြည့်စုံတော်မူ၏။ ၁ယော ၁း၇,၉
ဘုရားသခင်က ““အပြစ်ရှိသမျှ””ဟုပြောသောအခါ အားလုံးသောအပြစ်တို့ကို ဆိုလိုသည်။ ကားတိုင် ထက်၌ အသေခံခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးအတွက် အပြည့်အ၀ပေးချေခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။
စာတန်က သင်ကိုတိုက်ခိုက်နေသည်ဟု သင်ခံစားရပါက၊ သခင်ယေရှု၏ နာမတော်အားဖြင့် သူကို ခုခံပါ။ ကရာနိအရပ်၌ သခင်၏ ကြီးစွာသော အောင်နိုင်မှုကို တောင်းခံယူပါ။ ကျမ်းစာက ““...မာနတ်ကို ဆီးတားကြလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ သူသည်သင်တို့ထံက ပြေးသွား လိမ့်မည်။””
ယာ ၄း၇ ဟုဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုးကြားမှုရှိသော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းရမည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုးကြားမှုရှိသော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီး ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်၏အသံကို ဂရုစိုက်နားထောင်ပါက၊ ဤစိတ်သည် ရှင်းလင်း နိုးကြားနေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နာမခံပါက ဤစိတ်သည် မာကျောလာ မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုနားထောင်ရန်နှင့် နာခံရန် ငြင်းပယ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာ အသက်တာကို ပျက်စီးစေသည်။ ကျမ်းစာက ““ညီအစ်ကိုတို့... သတိပြုကြလော့။ ဒုစရိုက်လှည့်ဖျားခြင်းအားဖြင့် သင်တို့စိတ်နှလုံး မခိုင်မာ စေခြင်းငှာ ....””ဟုဆိုသည်။ ဟေဗြဲ ၃း၁၂-၁၃
ပြန်လည်နိုးကြားရေးလုပ်ငန်းများ၌ ဘုရားသခင်၏ အသုံးပြုခြင်းကို များစွာခံရသူ Evan Roberts ဆိုသူသည် လူများအား ဤမေးခွန်းကို မေးရန်နှစ်သက်သည်။ ““လူတစ်ဦးဦးကို သင်နောက်ဆုံးတောင်းပန် ခဲ့တဲ့အချိန်ကို ပြောပြပါ။”” အကယ်၍ နောက်ဆုံး တောင်းပန်စကား ဆိုခဲ့သည် အချိန်မှာ အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ် ပါက၊ တခုခုသည် မှားယွင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း သူက ထောက်ပြလေ့ရှိသည်။
မည်သည့်ယုံကြည်သူမဆို၊ အခြားလူများအပေါ်တွင် အပြစ်ကျူးလွန်မှုမရှိဘဲ သူတို့အနားတွင် ကြာရှည်စွာ နေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျမ်းစာက ““ငါတို့ရှိသမျှသည် အများသောအားဖြင့် မှားတတ်ကြ၏။”” ဟုဆိုသည်။ ယာ ၃း၂
ကျွန်ုပ်တို့သည် တချိန်ချိန်၌ အခြားလူများအပေါ်တွင် အပြစ်ကျူးလွန်မည်မှာ သံသယရှိစရာ မလိုသောကြောင့်၊ မေးရမည့်မေးခွန်းမှာ ““၄င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ? ကျွန်ုပ်တို့သည် မာကျော ခက်ထန် ဘ၀င်မြင့်လျက် မိမိမှားကြောင်းကို ၀န်ချရန် ငြင်းပယ်မည်လော။ (သို့မဟုတ်) မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချလျက် တောင်းပန်မည်လော? ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချ လျက်၊ လူများနှင့် ပြန်လည် သင့်မြတ်စေရန် လုပ်ဆောင်ကြရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို တောင်းပန်တတ်၍ အဖိုးအခကို ပြန်လျော်ပေးတတ်သော အလေ့ အကျင့်မျိုးကို ရရှိအောင်စိုက်ပျိုးရမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ဘုရားသခင်ထံဝန်ခံပြီး အခြားသူများနှင့်သင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်သည်
ရှင်းလင်း ၍ နိုးကြားနေမည်ဖြစ်သည်။ ဤအခြင်းအရာသည် ဘုရားသခင်ကို နာခံလျက် အသက်တာကို လျှောက်လှမ်းအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေါလု၏ အောင်မြင်သော အသက်တာ၏ ကြီးမြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ဤသို့ဖြစ် သည်။ သူသည် သူ၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နာခံခဲ့သည်။ သူ၏ သြတ္တပ္ပစိတ်က ကန့်ကွက်သော မည်သည့် အရာကိုမဆို သူ့ဘ၀ထဲသို့ ၀င်ခွင့်မပြုပါ။ ပေါလုသည် ရိုးသားစွာဤသို့ပြောနိုင်ခဲ့သည်။ ““ယနေ့တိုင်အောင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်၌ အပြစ်တင်ခွင့်နှင့် ကင်းလွတ် လျက် အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နာခံမှုရှိလျက် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်မှာ
(က) ဘုရားသခင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသော အစိတ်အပိုင်းတခုမဟုတ်ပါ။
(ခ) ဘုရားသခင်က အမှုကိစ္စတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်အားဖြင့် ဆင်ခြင်ကြရန် သတ်မှတ်ပေးထားသောနေရာဖြစ်သည်။
(ဂ) ဘုရားသခင်က သူ့အလိုတော်နှင့် သန့်ရှင်းမှုကို ဖော်ပြသောနေရာဖြစ်သည်။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်က အောက်ပါတို့ကို ကိုင်တွယ်သည်။
(က) ကောင်းသောအရာများနှင့် ဆိုးသောအရာများ
(ခ) မှန်သောအရာများနှင့် မှားသောအရာများ
(ဂ) အတိတ်နှင့် အနာဂတ်
(၃) အကယ်၍ သင့် သြတ္တပ္ပစိတ်က သင်တစုံတခုကို လုပ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဟု သတိပေးပါက၊ သူပြောတာဟုတ်မဟုတ်၊ အခြားယုံကြည်သူတဦးနှင့် ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
(၄) အကယ်၍သင်သည် အမှားတခုခုကို လုပ်ပြီးပါက ချက်ချင်းဝန်ချတောင်းပန်၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် စေသော ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ကို တောင်းခံယူပါ။
(၅) အကယ်၍သင့်သြတ္တပ္ပစိတ်က တစုံတခုကိုလုပ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသည်ဟု သတိပေးပါက၊ ထို အရာကို မလုပ်ပါနှင့်။
လူများသည်သူတို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နှုတ်ပိတ်ရန်အတွက် နည်းလမ်း ၂-ခုကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အောက်ပါတို့ထဲမှ သူတို့လုပ်သော နည်းလမ်း (၂)ခုကို အမှန်ရွေးပါ။
(၆) သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲကြသည်။
(၈) သူတို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်နှင့် ငြင်းခုန်ကြသည်။
(၉) စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ဤသို့တိုက်ခိုက်သည်။
(က) ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သကဲ့သို့ လုပ်သောသူများကို ပြသခြင်းအားဖြင့်၊
(ခ) ကျွန်ုပ်တို့အား မှားသော ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်စေခြင်းဖြင့်
(ဂ) ““သင်ထပ်ပြီး ရှုံးနိမ့်ပြန်ပြီ””ဆိုသော အတွေးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲသို့ ထည့်ခြင်း အားဖြင့်
(၁၀) ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်ခဲ့သော မည်သည့်အပြစ်ကိုမဆို ဘုရားသခင်သည် ခွင့်လွှတ်ပေးမည်လော့?